ओके जर्नीमा अनलाइनसँगै फोनबाट समेत बसको टिकट काट्ने सुविधा - Tech News Nepal Tech News Nepal
२०७८, ७ कार्तिक आइतबार |
चीनमा कसरी टिकिरहेको छ एप्पल ?
तीन मोडलमा सार्वजनिक हुँदै रेड्मी नोट ११, कति
रातभर मोबाइल चार्जमा राख्नु के गलत हो ?
डिशहोमको ४० एमबीपीएस इन्टरनेट जोड्दा आईपीटिभी निःशुल्क
ओके जर्नीमा अनलाइनसँगै फोनबाट समेत बसको टिकट काट्ने सुविधा
काठमाडौं । ओके जर्निको मोबाइल एपबाट अनलाइनसँगै कल गरेर बसको टिकेट काट्न सकिने भएको छ । एपमा हालै मात्र यो नयाँ सुविधा थप भएको हो ।
कम्पनीका संस्थापक तथा कार्यकारी निर्देशक राजश दाशले हाल देशभरका ६० भन्दा बढी रुटमा चल्ने बसको टिकेट ओके जर्नीमा उपलब्ध रहेको जानकारी दिए । यातायात क्षेत्रलाई केन्द्रिकृत गर्दै डिजिटलाइज गर्न र यात्रुको आरामदायी सुविधालाई मध्यनजर गर्दै कम्पनीले आफ्नो सेवा विस्तार गरिरहेको छ ।
अनलाइनमा बुक गरेको टिकेट उता टिकेट काउन्टरबाट समेत बिक्री भइसकेको हुने समस्या समेत आफूहरूले अन्त्य गरेको दाशले बताए । यसका लागि ओके जर्नीले गत महिनादेखि आफ्नो एपबाट सोझै सम्बन्धित बस चालक तथा कर्मचारीलाई कल गर्ने सुविधा समेत थपेको छ ।
ओके जर्नीले बसहरूका लागि इन्टरनेट बिना भिडिओ हेर्न मिल्ने वाई-फाई सिस्टम ‘ओके ट्युव’ समेत उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यसको सहयोगमा बसमा यात्रा गर्दा इन्टरनेट बिनै आफ्नो मोबाइल तथा ल्यापटपमा फिल्म तथा म्युजिक भिडिओ हेर्न सकिन्छ ।
ओके जर्नीको मोबाइल एपमा अनलाइन तथा अफलाइन टिकट खरिद गर्ने दुवै सुविधा उपलब्ध छन् । यात्रुहरूले ओके जर्नी मोबाइल एप डाउनलोड गरेपछि आफू जान चाहेको रुट चयन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यससँगै उपलब्ध बसका कर्मचारीहरूको नम्बर देख्न सकिन्छ । जसमा कल गरेर टिकेट बुक गर्न सकिन्छ । बस कर्मचारीसँगको आपसी सहमतिमा टिकेट बुक गरी काउन्टरमै गएर भाडा तिर्ने अथवा ई-सेवा तथा खल्ती लगायतका अनलाइन भुक्तानीका माध्यम रोज्ने दुवै विकल्प ओके जर्नीले दिँदै आएको छ ।
हाल एन्ड्रोइडमा मात्र रहेको ओके जर्नीको एप चाँडै आईओएसका लागि समेत उपलब्ध हुने कम्पनीले जनाएको छ ।
स्टार्टअपका लागि यी हुन् उत्कृष्ट ठाउँ, जहाँबाट जन्मिए ठूला-ठूला आइडिया
काठमाडौं । भर्खरै मात्र ‘दी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट २०२१ (जीएसईआर २०२१)’ सार्वजनिक भएको छ